Xiriir iyo Muuqaal | Martech Zone
Waxaan u adeegsanaa GotoMeting kaliya maalin kasta oo shaqada ah si aan ula hadalno macaamiisheenna. Wanaagsan run ahaantii aragtida mid ka mid ah macaamiisheena iyo kafaala qaadayaasha, Mindjet, oo matalaya fiidiyowga 'GotoMeeting'! Fiidiyowgu wuxuu lahadlayaa isku xirnaanta. Haddii aad qorsheyneyso a khariidada maskaxda ama dib u eegida qorshaha mashruuca… muuqashadu waa furaha. Khariidadaha maskaxda waxay sawiraan fikradaha, hababka iyo isku xirnaanta si ay u fududaato in la fahmo.
Gotomeeting, dabcan, waxay lamid tahay awooda hada si loola wadaagi karo cod ahaan, muuqaal ahaan (oo ay kujiraan video-ka websaydhka dhabta ah), iyo codsi dadka looga keenayo daafaha aduunka ama shirkada isla qolka. In kasta oo ay tahay xayaysiis ganacsi, farriinta ah saaxiibkeyga wanaagsan iyo saaxiibkey Jascha Kaykas-Wolff keenayaa, waa lama huraan.
Haddii aad jeclaan lahayd inaad waxbadan ka maqasho Jascha - hubi inaad dhageysato wareysigayaga:
Dhageyso Wareysiga aan la yeelanay Jascha!
Tags: helisetetingJascha Kaykas-WolffMindjetkhariidadda maskaxda
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 12:28 PM
Aad baad ugu mahadsantahay, Doug, inaad wadaagto fiidiyowga # Kulan 'IsBelieving' ee Jascha! Waxaa jira waxyaabo badan oo soo socda oo ay ka mid yihiin Jascha iyo MindJet 🙂 Waxaan rajeynayaa inaad sifiican u shaqeyneyso!
Agoosto 27, 2012 saacaddu markay ahayd 3:58 PM
Waad sharadaysaa, @justinlevy: disqus! Wax soo saar weyn iyo fiidiyowga sifiican ayaa loo qabtay. Waxayna i xasuusisay inaan u baahanahay inaan iskaga khaldo barnaamijka 'GotoMeeting' ee ku jira ipad-kayga!